J: Health - Ninth of SIX !
Health - Ninth of SIX !
မကြောက်ပေါင်ကွယ်...... ခြောက် ပြမယ်....
အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ ၃လသားအရွယ် သမီးလေး Bailey ၊ Moll ၊ Savannah ၊ သားလေး Blake ၊ Cole ၊ Grant.
Lake Havasu City, Arizona တွင်နေထိုင်သော Bryan 29 နစ် နှင့် Jenny Masche 32နစ်တို့စုံတွဲသည် ၂၀၀၄ နစ်တွင် လက်ထပ်ခဲ့ကြပြီး သားသမီးမျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။ ၂ကြိမ် ကလေး ပျက်ကျ ပြီးသော အခါ ဆရာဝန်တချို့က ခလေးတည်ရန် ခက်ခဲ သည်ဟု မှတ်ချက် ချခဲ့ကြသည် တချို့ က in-vitro fertilization ရန် အကြံပေးခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတွင် သနွေတည်ဆေး Follistim ကို အသုံးပြုရန် ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြသည်။ ယင်းဆေးမှာ သားဥ ပိုမို တည် စေရန် အားပေးသည့် ထိုးဆေး ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဆေး scan စစ်ကြည့် သောအခါမှ ၆မွှာပူး သနွေ ဆောင်ထား ကြောင်းသိ ရသည်။ ဆရာဝန်များက သနွေ အားလုံး အသက်ရှင်ရန် အခွင့်ရေး နဲပါးကြောင်း တချို့ ကို ဖျက်သင့် ကြောင်း အကြံ ပေးခဲ့ကြ သော်လည်း သားသမီး များကို စွန့် ပစ် နိုင်စွမ်း မရှိသော မိဘ အနေဖြင့် နေ့ စဉ် ဆုတောင်း နေခဲ့ ကြရသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၁၂ပတ် မှစရ်ျ Phoenix ဆေးရုံ တွင် အတွင်းလူနာ အဖြစ် ကြပ်မတ် ကုသခံ ခဲ့ရသည်။ ကိုယ်ဝန် ၃၀ ပတ်တွင် ၅မိနစ်အတွင်း ကလေး ၆ယောက် စလုံး ကို အောင်မြင်စွာ မွေးဖွားနိုင်ခဲ့သည်။
ကလေးများမှာ အလွန် အရပ်ရှည် လှသည် ၁၆လက်မရှိပြီး တဦးလျှင် ၂-၃ပေါင်ခန့် သာ အလေးချိန်ရှိသည်။ သမီး၃ဦး သား၃ဦးမွေးဖွားခဲ့ရသည်။ မိခင်မှာ မွေးစဉ်အချိန်တွင် နလုံးမှာ ၅ဆမျှ ယောင်ရမ်းသလို ခြေထောက်တွင် သွေး အနဲငယ် ပိတ်ဆို့မှု့ များ ခံစားရရှာသည်။
လိမော်ရောင် ကလေးအမွှာလေးများမှာ တရုပ်ပြည်မှ ဖြစ်ပါသည်။
တွန်းလှည်းထဲမှ ကလေးများမှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှဖြစ်သည်။
ကလေး အားလုံးအသက်ရှင်သော ခြောက်မွှာပူး မှတ်တမ်းစာရင်း များအရ ၉ကြိမ်မြောက် ခြောက်မွှာပူး ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ပထမဆုံး မှာ လွန်ခဲ့သော ၂၄နစ်ကာလမှ Walton sisters များဖြစ်ကြောင်းသိရ၏။ စာရေးသူအနေဖြင့် ၆မွှာပူး ၃စုံကို မဂဇင်းများတွင် ဖတ်ခဲ့ရသော်လည်း မှတ်တမ်းမထားခဲ့ပါရ်ျ မတင်ပြနိုင်တော့ပါ။
ကဲ တနေ့ လျှင် ၃၈ နို့ ပုလင်း၊ အထည် ၅၀ အနှီးကို ၁၈ ကြိမ် လဲလှယ်ခြင်း ဖြင့် အလုပ်ရှုပ် ချင်သလား ?
Technology - Are youawise or dull?
News - So what! Who's care!
Health - Is that you in the photo?
Food - Ya Da Yar (စိမ်လုံး သိကြားယတြာ ) ပြည်မလိုင်...
Technology -2Earth Identify Flying Saucer Object...
Technology - 1 ပြုံးပျော်နိုင်ပါစေ.
News - ပြုံးပျော်နိုင်ပါစေ.
News - Ghosty orbs ၀ိညာဉ်
News - သာမန်ထက် နည်းနည်းထူးသော သတင်းများ
Health6Sign Language - သင်္ကေတ ဘာသာစကား
Technology - EIFO not UFO
Health - Fat woman and Flood
Fashion -3(Body Beauty Parlor -1 Pinple)
Health -3(Diet pill)